किन पछी प-यो प्रचूर पर्यटकीय संभावना रहेको अर्नाकोट ? – ebaglung.com
किन पछी प-यो प्रचूर पर्यटकीय संभावना रहेको अर्नाकोट ?
२०७६ भाद्र १७, मंगलवार १६:५५	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बाइसे चौविसे राज्यमा राजा बस्ने गरेको अर्नाकोट पछिल्लो समय विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा र प्रर्यटकिय क्षेत्रको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा पछाडी परेको छ ।
बुर्तिबाङ देखि सुर्तिबाङ जोडिएको एउटै डाँडोको विचमा रहेको अर्नाकोट ढोरबराह मन्दिरको दोश्रो भाईको रुपमा परिचित अर्नाकोट बराहले परिचित छ । १७ पञ्चायतमा अर्नाकोट देउरालीमा मुखिया बस्ने र मुद्दा छिन्ने, सबैलाई न्याय दिने गर्दथे भन्ने स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । अर्नाकोट बराह मन्दिर नजिकै जोगी बस्ने जोगीकुटी भन्ने स्थान पनी छ जहाँ जोगीले जमिन खनेर बसेकोे भग्नाअबशेष (खाडल) समेत त्यहाँ देख्न सकिन्छ ।
देउराली आफैमा पुग्दै आनन्द लाग्ने सेतै देखिने अन्नपूर्ण हिमाल, सुर्तिबाङको धुरी, गुल्मिको रेसुङगा , तिन बहिनी लेक,गाजाको लेक, लगाएत दर्जनौँ प्रर्यटकिय स्थलहरु खुल्ला आकाशबाट नजिकै देख्न सकिन्छ ।
अर्नाकोट हुलाक कार्यालय समेत पहिले अर्नाकोटबाटै सञ्चालनमा थियो हाल बुर्तिबाङ बजारमा सारीएको छ । त्यस्तै राजा बस्दै गर्दा २२ ढोका भएका दरबार समेत अर्नाकोटमा रहेको र त्यसको उचित सम्भार गर्न नसकेकै कारण लोप भएर गएको स्थानीय झमबहादुर कुवँरको भनाई छ ।
हाल बराह गुठीको नाममा अर्नाकोटमा दुई रोपनी जग्गा र काल्नेचौरमा ४० रोपनी खेत रहेका कारण मन्दिरको सम्पत्ति समेत लाखौँ रुपैयाँको रहेको कुवँरको भनाई छ । हाल ४० रोपनी खेत भाडामा दिइएको र भाडा बापत आउने रकमले विद्यालय सञ्चालमा महत्वपुर्ण सहयोग पुगेको काल्नेचौरका अर्का स्थानीय समाजसेवी झमा घर्ती बताउँछन् ।
परापूर्वकालदेखि तिजमेला गर्ने थलोको रुपमा रहेको अर्नाकोट बराहथानमा निसी, भुजी, सहित जिल्लाका विभिन्न भुभागबाट सयौँ जना तिजको दिन अर्नाकोट पुग्ने गरेका हुन् । स्थानीय क्लब, आमा समुहले समेत अर्नाकोट मेलाको इतिहाँस झल्काउन र प्रर्यटन प्रर्वधन गर्नका निम्ती कार्यक्रमको आयोजना गरीँदै आएको अर्नाकोट बराह युवा क्लबका मेला संयोजक लालबहादुर कुवँर बताउँछन् ।
दुई पालिकाको सिमानामा पर्छ देउराली
अर्नाकोट देउराली दोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकाको सीमानामा पर्दछ । निसीखोला गाउँपालिकाको वडा नं.२ मा पर्ने क्षेत्रमा रहेको उक्त क्षेत्र नजिकै एयरपोर्ट निर्माण गर्ने उदेश्य स्वरुप २०७४ सालमा सर्वे डिजाईन समेत भएको हो । सर्वे सफल भएपनी अन्य प्रकृया अगाडी बढन बाँकि छ । अर्नाकोटमा एयरपोर्ट बन्नुपर्नेमा अधिकाँशको मत छ । “आफुले अर्नाकोटमा घुम्दै गर्दा धेरै सम्भावना देखियो यस क्षेत्रको विकास अति आवश्यक छ नेकपाका नेता शेरमान घर्तिले भने ।”
अर्नाकोट क्षेत्रलाई प्रर्यटकिय हव निर्माण गर्न र पश्चिम बागलुङ सहित, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, म्याग्दि लगाएतका जिल्लाका जनतालाई जहाज चढेर विभिन्न स्थानमा पुग्न तथा प्रर्यटक प्रवर्धनमा अर्नाकोट विमानस्थल महत्वपुर्ण रहने भएका कारण त्यसको प्रवर्धन र काम अगाडी बढाउन सबैको साथ आवस्यक रहने र आफुले यसको विकासका निम्ती निरन्तर प्रर्यनशील रहेको नेपाली काँग्रेसका नेता दोर्ण कुवँर बताउँछन् ।
“प्रर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना बढदै गएको अर्नाकोटमा हालसम्म प्रर्याप्त मात्रामा पिउने पानी छैन् । स्थानीयलाई गाउँपालिका सम्म पुग्नकै निम्ती २२ किलोमिटर घुमाउरो सडक पार गरेर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बल्ल तल्ल आधारभुत तहसम्मको विधालय भयो, अव मावि तहसम्म चलाउने अभिायनमा छौँ , हाल स्वास्थ्यका निम्ती सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई समेत निर्माण भइसकेको छ ।
त्यहाँबाट सामान्य अवस्थाका विरामीले स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् । खानेपानीका निम्ती पहल भएको भन्ने सुनेका छौँ हेरोँ क्रमश विकास हुन्छ कि भन्ने आशामा छौँ स्थानीय समाजसेवि एवम अर्नाकोट आधारभुत विद्यालयका निवर्तमान प्रअ झमबहादुर कुवँरले भने ”।
अर्नाकोटमा निसीखोला गाउँपालिका सदरमुकामदेखि अझै सडक सञ्जालले छुन सकेको छैन् । ढोरपाटन नगरपालिका देखि केहि बर्ष पहिलेनै सडक पुगेपनी स्थानीयलाई गाउँपालिका पुग्न ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. २ हुँदै २२ किलोमिटर घुमाउरो सडक पार गरेर यात्रा गनुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा गाउँपालिकाले सडक सञ्जाल जोड्नका निम्ती बजेट विनीयोजन गरी केहि काम भएपनी अझै सडक सञ्जाल जोडिएको छैन् । उक्त सडकलाई चाँडै देउराली सम्म जोड्ने वडा नं.२ का अध्यक्ष कुविर विश्वकर्मा बताउँछन् ।
कला र सँस्कृर्तिमा समेत अगाडी रहेको अर्नाकोटमा स्थानीय समाजसेवी युवा प्रेमबहादुर कुवँरले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरामा सहयोग गर्दे आएका छन् । एकिकृत विकासको अवधारणा ल्याउने र अर्नाकोटलाई प्रर्यटन प्रवर्धन सँगै यहाँका स्थानीयको जिविको पार्जनमा समेत टेवा पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन सके अर्नाकोट महत्वपुर्ण स्थल रहने तर सँघियताकै कारण विकासले थप गति नसक्ने निसीखोला गाउँपालिका ३ का अध्यक्ष जुनविक्रम शाहिको भनाई छ ।
अर्नाकोटमा प्रर्यटकका निम्ती होम स्टे समेत सञ्चालनमा आइसकेको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाको सदरमुकाम बुर्तिबाङ देखि वडा नं.२ को तारिखेत, खल्बाङ, तल्लो अर्नाकोट हुँदै नाच्नेडाँडा अर्थात देउराली डाँडा पुग्न सकिन्छ ।
अन्तमा, सरकारले सन २०२० लाई भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउँदै गर्दा सम्बन्धित निकायले एकपटक अर्नाकोट देउरालीलाई पनी प्रर्यटकीय सम्भावनाको रुपमा हेर्ने कि ?
२०७६ भदौ १७ ।
कुँडुलेमा सुरुङ भित्र शालिग्राम संग्राहलय : आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरुका लागी आकर्षण केन्द्र !